यूरिक एसिड बढ्नु हुनसक्छ खत’रनाक, यसरी गर्न सकिन्छ नियन्त्रण ! – Annapurna Daily
यूरिक एसिड बढ्नु हुनसक्छ खत’रनाक, यसरी गर्न सकिन्छ नियन्त्रण !
On Sep 27, 2021 951
विज्ञहरूका अनुसार यदि तपाईंको यूरिक एसिड उच्च छ भने यसले मिर्गौलालाई असर गर्छ। यूरिक एसिडको स्तर बढ्नाले तपाईंको मिर्गौलाको फिल्टर गर्ने क्षमतालाई असर गर्छ। यदि यो लगातार उच्च रहन्छ भने, त्यसपछि तपाईंको मूत्र हड्डी भित्र पस्न थाल्छ। यो अवस्थाले बिभिन्न रोगहरू निम्त्याउन सक्छ।
यूरिक एसिड धेरै कारणले बढ्न सक्छ र कहिले कहिँ बिना कारण पनि हुनसक्छ। यो जीवनशैली परिवर्तनका कारण मात्र पनि हुनसक्छ। थाहा पाउनुहोस् कि के-कस्ता कारणले शरीरमा यूरिक एसिड बढ्न थाल्छ।
खानपान: यदि कसैलाई यूरिक एसिड बढ्ने समस्या छ भने उनीहरूले आफ्नो खानपानमा विशेष ध्यान राख्नु पर्छ। उच्च यूरिक एसिडका बिरामीहरूलाई उच्च फाइबर भएको खाना खान सल्लाह दिइन्छ। साथै तपाईंले आफ्नो जीवनशैलीमा केही परिवर्तनहरू गर्नुपर्दछ।
हाई फाइबर फुड: विभिन्न अध्ययनको आधारमा यो कुरा पत्ता लागेको छ कि जसले आफ्नो खानामा फाइबर भरपूर मात्रामा समावेश गर्छ उनीहरूलाई युरिक एसिड बढ्ने जस्तो कुनै समस्या हुँदैन। विज्ञहरूको यो धारणामा छ कि बिहान नास्तामा उच्च फाइबर युक्त खाना खाँदा शरीरको सम्पूर्ण फोहोर पदार्थ मल र मूत्रको सहयोगले बाहिर आउँछ र शरीरको यूरिक एसिड नियन्त्रणमा रहन्छ। यसको लागि तपाईं स्याउ, सुन्तला, गाँजर, काँक्रो, नाशपाती र जौ आदि खान सक्नुहुन्छ।
आलसको बीउ: यूरिक एसिडका बिरामीले खाली पेटमा आलसको बीउ चबाएर खानुपर्दछ। यो गरेर यूरिक एसिड धेरै हदसम्म नियन्त्रणमा रहन्छ।
कागती पानी: यदि हरेक पटक तपाईंको मेडिकल रिपोर्टमा यूरिक एसिड बढ्दैछ भने तपाईंले बिहान कागती पानी पिउनु पर्छ। विज्ञहरूका अनुसार बिहानको समयमा तातो पानीमा कागतीको रस मिलाएर सेवन गर्नाले तपाईंलाई विभिन्न फाइदाहरू हुन्छन्।
भिटामिन-सी: कोरोना अवधिमा भिटामिन सी धेरै नै फाइदाजनक छ। यो यूरिक एसिड बिरामीहरूका लागि पनि धेरै लाभदायी हुन्छ। यूरिक एसिडलाई नियन्त्रणमा राख्न, तपाईंले किवी, अमला, सुन्तला आदि खानुपर्दछ।
योगा: योगको माध्यमबाट मानव शरीर फिट र स्वस्थ राख्न सकिन्छ। वृक्षासन, भुजंगासन, उष्ट्रासन र कपोतासन प्रदर्शन गर्नाले यूरिक एसिड नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्दछ। यदि तपाईंले यी आसन ब्रेकफास्ट भन्दा पहिले गर्नुभयो भने, यो अझ राम्रो हुनेछ।